A Heat paompy dia napetraka ho akaiky araka izay azo atao ny rafitra filtration dobo filomanosana. Izany dia natao ho ampiasaina an varavarana ka tsy mitaky na rakotra manohitra ny singa. Raha ny marina raha misy Heat Pump dia miafina nandritra ny hetsika dia tsy hanao optimally.
Tsy misy nihaino takian'ny ny Heat Pump tahaka ny rivotra-javatra mampahalefaka. Fotsiny hanaisotra izay ravina, ahitra, taratasy, sns izay indraindray manangona avy amin'ny rivotra. Ny dobo simika dia tokony hijanona foana voalanjalanja. Ny evaporator grills dia mifono mba hisorohana ny harafesiny. Na izany aza, raha miaina akaikin'ny rano ny sira-tontolo iainana dia azonao atao ny Hose teo ivelany evaporator coil mba hanampy fisorohana ny hanorina ny sira sy harafesina.
Eny. Na izany aza izany rehetra izany dia miankina amin'ny haben'ny ny kamory sy ny fotoana ny taona. Hafanana paompy dia natao mba hihazonana ny mari-pana dobo isan'andro. Raha ny hafanana paompy dia salantsalany araka ny tokony ho any amin'ny dobo filomanosana haben'ny, indray mandeha ny hafanana tiana no tonga dia avy hatrany foana ny mari-pana volana ny ela.
Herinaratra amidy amin'ny alalan'ny tarika antsoina hoe kilowatt-ora. Kilowatt-iray ora mitovy amin'ny 3412 BTU. BTU mijoro ho an'ny Britanika Unit mafana. Izany dia vondrona ny famarana izay misy mpanamboatra paompy mampiasa hafanana eo amin'ny fepetra arahana.
COP mijoro ho Coefficient ny fampisehoana izany hoe. Ny tahan'ny-pahefana amin'ny fitondrana Output torohevitra. Izany no miankina amin'ny mari-pana ny Ambient rivotra sy ny hafanana ny rano avy amin'ny dobo filomanosana. Milaza aminao ny angovo fahombiazana ampy ny hafanana paompy.
Toy ny dobo filomanosana rehetra fanafanana rafitra ianao Nanoro hevitra hampiasa ny dobo rakotra rehefa dobo filomanosana tsy ampiasaina. Izany dia hitandrina lasa etona (ny lehibe indrindra hafanana very) ho faran'izay kely ary toy izany koa mampihena ny vola lany fanafanana dobo ankapobeny sy ny tsy ilaina fahasorenana. Ny dobo dia afaka manapaka tanteraka rakotra hafanana very amin'ny 50% ny 95%.
Ny hafanana Aquark paompy dia mandany ambony kalitao singa, na dia tsy misy toerana iray feno ny fikojakojana, farihy paompy mora hafanana maharitra 10 ka hatramin'ny 20 taona. Kanefa, amin'ny fikarakarana tsara, ny hafanana dobo paompy dia afaka haharitra ny androm-piainany ara-bakiteny.
Ny tena andrin'ny ny EU vaovao F-Gas fitsipika mba hampihena ny famoahana entona sy ny hifindra mankany ambany GWP vahaolana. Midika izany ny dingana teo amin'ny fihinanana ny HFCs sy ny fampihenana ny 37% tamin'ny 2020 ary 79% amin'ny 2030. By 2025 tokana Split A / C rafitra amin'ny latsaky ny 3kg refrigerant anjara-raharahany dia tokony ahitana ny refrigerant amin'ny GWP.
R32 manana asa koa fanerena R410A manodidina ny 12-26 Bar (174-377 PSI), na izany aza dia manana tsara kokoa R32 fahaizany mba hifanakalo hafanana-entana noho ny R410A sy ny fahaiza-mamonjy ambony noho R410A nanao ny rafitra mahomby kokoa.
R32 manana GWP ambany noho R410 sy mampiasa 30% tsy refrigerant didy hamokatra entana mitovy fahaizana. Noho izany ny CO2 tanteraka émission azo Nihena 77% manodidina.
Amin'ny ankapobeny ny GWP ambany ny ambony ny haavon'ny flammability, R32 tsy misy hafa. R32 efa nomena hanasokajiana A2L ary voasokajy Flammable sokajy A2. Fanasokajiana ny toromarika 67/548 / EEC & 1999/45 / EC: F +; R12 Extremely flammable. Koa ihany no za-draharaha sy araka ny tokony ho nampianatra olona tokony hifehy URL etona eo ambany fanerena.